သင်ဒီမှာပါ: Home / ပေါ်ပင် gullies များအတွက်မော်ကွန်း
07 / 05 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon 1 မှတ်ချက်
ယူနိုက်တက်စတိတ် - အစဉ်အဆက်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို gullies ကိုကြား? ငါ၏အမှုကိစ္စများတွင်ဘယ်တော့မှ! ဤတွင်ရုံကိစ္စတွင်: gullies တစ်ကြာရှည်မိုးရှာပြီးနောက်ရေ running အားဖြင့်မြေကြီးကိုဖြတ်ရုံအနည်းငယ်သာလိုင်းများဖြစ်ကြ၏။ သူတို့ကတိုက်စားမှုကြောင့်အများကြီးဖြစ်ပေါ်စေ! ကောင်းမွန်သောသတင်းကြောင့်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်သူတို့ထဲကတစ်ဦးအနည်းငယ်များမှာ!
Filed under: တိုက်စားမှု Solutions အတူ Tagged: ပေါ်ပင် gullies, မြက်, သစ်ပင်များ